Kedu ihe na-eme ka Usoro Ọha Mgbasa Ozi Ọma? | Martech Zone
Tuesday, April 28, 2015 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'ehihie a, mụ na ụfọdụ ndị isi nọdụrụ ala na azụmaahịa, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na dijitalụ na anyị na-ekwu maka ihe ọ ga-ewe maka ire ahịa ọfụma. The otutu otutu mmadu kwenyere bụ mara mma dị mfe, ma ọ ga-eju gị na otú ọtụtụ ụlọ ọrụ mgba… ebe na-amalite.
Anyị na-akọrọ akụkọ banyere ụlọ ọrụ ndị na-aghọtaghị uru ha bara, mana ha na-azụ ahịa maka saịtị ọhụrụ. Anyị na-akọrọ akụkọ banyere ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ụdị ahịa na azụmaahịa ọ bụla, na enweghịkwa obi ụtọ na mbọ ahịa ha. Ma n'ezie, okwu a na-apụta ma na-ekwughachi na usoro mgbasa ozi mmekọrịta - ebe oghere gị na-eto nke ukwuu ma onye ọ bụla na-anụ ya.
Ekele dịrị ndị ahịa ndị ọzọ na-eche otu. Ọ bụrụ na i lee anya nke ọma na Isi ihe ịga nke ọma asaa nke atụmatụ azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na ndị isi echiche Brian Solis na Charlene Li, ọ ga-apụta ìhè nke ọma na ị ga-enwerịrị nnukwu ntọala na atụmatụ nke ewuru ma gbanwee.
Isi ihe ịga nke ọma asaa nke atụmatụ azụmaahịa mmekọrịta ọha na eze
Kọwaa ihe niile ebumnuche azụmahịa.
Guzosie ike na ọhụụ ogologo oge.
Gbaa mbọ hụ nkwado ndị isi.
Kọwaa ihe atụmatụ okporo ụzọ.
Guzosie ike oha na ntuziaka.
Ndị ọrụ nchekwa, Ihe onwunwe, na ego.
Tinye ego na technology nyiwe na-agbanwe.
Ọtụtụ oge anyị na-ele ndị ahịa na-alụ ọgụ n'ihi na ha na-amalitekarị na ụzọ ọzọ… ịzụrụ ihe ngwọta, wee chọpụta ihe ha chọrọ iji mee ya, wee na-agbagharị maka usoro, atụmatụ na mmefu ego, ma mesịa chọpụta ihe ebumnuche na ọhụụ ga-abụ . Argh!
Ọ bụkwa ihe kpatara na anyị anaghị esi n'ọnụ ụzọ ámá na-ekwupụta ụfọdụ ikpo okwu nke kachasị mma n'ahịa. Ogologo atụmatụ, uru, nsogbu na ọnụ ahịa nke ngwa ọrụ mgbasa ozi kwesịrị ka enyocha ma hazie ya maka mkpa azụmaahịa, akụrụngwa na ọhụụ. Ọ bụghị ihe omimi anyị ka anyị kwado ngwaọrụ dị iche iche maka ụlọ ọrụ ndị yiri ya mgbe anyị nyochachara ihe ndị a.
Download Brian na Charlene's ebook - Isi ihe ịga nke ọma asaa nke atụmatụ azụmaahịa mmekọrịta ọha na eze maka nlezianya anya banyere ihe ọ ga - ewe iji wee zụlite usoro mgbasa ozi na-aga nke ọma.
Tags: brian solischarlene naọhụụ ogologo ogeelekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa oziihe mgbaru ọsọ mgbasa ozielekọta mmadụ media egoụzọ mgbasa ozi mmekọrịtandị ọrụ soshal midiausoro mgbasa ozi ọha na ezeelekọta mmadụ media ihe ịga nke ọmateknụzụ mgbasa ozi mmekọrịtaatụmatụ ụzọ